Apple dia mandefa sehatra hijerena ny fivezivezena any amin'ny firenena noho ny COVID-19 | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | | About us
Andro vitsy lasa izay dia nampahafantatra anao izahay fa ny Apple Maps dia nahazo fanovana kely avy lavitra. Ao amin'ny bara fitadiavana ilay fangatahana mihitsy, nomena ny lehibe kokoa ny toeram-pivarotana lehibe sy orinasa lehibe indrindra amin'ity krizy ara-pahasalamam-bahoaka ity noho ireo sokajy hafa. Na izany aza, Apple dia te handroso lavitra ary nandefa fitaovana iray jereo ny fiovana amin'ny fivezivezen'ny mponina isaky ny firenena, mifototra amin'ireo hazo fikarohana avy amin'ny rindranasan-tsarinao manokana. Noho io fitaovana io dia afaka mahita ny vokatry ny fepetra fanagadrana any amin'ny firenena tsirairay mifototra amin'ny fikarohana ao amin'ny Apple Maps.
Ny Espaniola dia mampihena ny fiveziveziny manodidina ny 90%
Io data io dia ateraky ny fanisana ny isan'ny fangatahana natao tamin'ny Apple Maps momba ny torolàlana any amin'ny firenena / faritra sy tanàna voafantina. Ny angona izay alefa avy amin'ny fitaovan'ny mpampiasa mankany amin'ny serivisy Maps dia mifandraika amin'ireo mari-pamantarana mihodina, noho izany dia tsy manana mombamomba ny fihetsik'izy ireo sy ny fikarohana azy i Apple. Ny fahazoana angona amin'ny firenena / faritra na tanàna iray manokana dia iharan'ny anton-javatra maromaro, ao anatin'izany ny tokonana farafahakeliny ho an'ny fangatahana adiresy natao isan'andro.
Ny mekanisma an'ny sehatra Apple vaovao dia tsotra ary natao batisa tamin'ny anarana hoe tatitra momba ny fironana. Noho ireo tatitra ireo dia afaka mahita ny fironana amin'ny fivezivezena isika isaky ny firenena maherin'ny 60 voarakitra an-tserasera. Manampy antsika hitandrina haingana izany nanao ahoana ny vokatry ny fepetra samihafa noraisina avy amin'ny governemanta isam-pirenena. Ireo fahasamihafana dia navahana tamin'ny tongotra, tamin'ny fiara na tamin'ny fitateram-bahoaka.
Angonina ny angona manisa ny isan'ny karoka mitambatra ao amin'ny Apple Maps. Saingy efa nanamafy i Apple fa tsy mifandray amin'ny ID Apple io data io. Tsy misy koa ny firaketana ireo toerana notsidihin'ny mpampiasa tsirairay. Ho fanampin'izay, nataon'izy ireo antoka fa ny fangatahana fikarohana tsirairay dia mifandraika amin'ny mari-pamantarana tsy ampoizina hisorohana ny olana amin'ny fiainana manokana.
Maimaimpoana ny fitaovana ary ny kisarisary mahaleo tena isam-pirenena dia azo alaina hevitra ao amin'ny Tranonkala ofisialin'i Apple. Amin'ny tranga any Espana, ny fepetra noraisin'ny Governemanta dia midika fa nihena 90% ny fivezivezena momba ny fandehanana sy ny fitateram-bahoaka. Na izany aza, ny fiarakodia amin'ny fiaran'ny tenanao dia nihena 81%.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia mandefa sehatra hijerena ny fivezivezena any amin'ny firenena noho ny COVID-19
HomePod nandavaka iOS ho an'ny tvOS